ikhaya/imiyalelo/Yenza Windows 10 ngokukhawuleza-ukukhawulezisa ikhompyuter yakho
Vangelis11. Fe bruwari 2016
Khubaza imemori ebonakalayo Windows 10
Ukucoca iDisk Yenza ukucoca
Khubaza iziphumo ezibonakalayo
Ukukhusela i-hard drive
Nokuba ukhawuleze nge-SSD hard drive
Lungiselela Windows 10 ngesoftware
Uyafuna ukwenza Windows 10 ngokukhawuleza? `Windows 10 yeyona nkqubo ilungileyo nekhawulezayo uMicrosoft ayibeke emarikeni. Kodwa ekuhambeni kwexesha inokwenzeka loo nto Windows 10 ayisasebenzi ngokukhawuleza njengosuku lokuqala. Nangona inkqubo yokusebenza incinci kakhulu kwaye isebenza ngaphandle kweengxaki ezinkulu kwiikhompyuter ezindala okanye kwiincwadi zamanqaku, sinokuyikhawulezisa inkqubo ngamaqhinga ambalwa. Siza kwazisa amaqhinga ambalwa malunga nendlela ongayenza ngayo Windows 10 ngokukhawuleza:
Yenza Windows 10 ngokukhawuleza
Windows 10 Ukuqalisa ngokuzenzekelayo: Qala ngokukhawuleza
Ukuba ufaka iinkqubo Windows 10 ekuhambeni kwexesha, ezinye iinkqubo ziya kuqala ngaphandle kolwazi lwakho. Loo nto inesiphumo sokuba 10 Windows iqala kancinci kwaye ithatha ixesha ngaphambi kokuba usebenze nayo. Iinkqubo ezininzi ezifakiweyo zifakiwe Ukuqala ngokuzenzekelayo ukuze abo bangasemva baqale kwaye baqhube. Ngeengcebiso zethu sikubonisa ukuba unokwenza njani Windows 10 ngokukhawuleza.
Lungisa i-autostart-yenza iinkqubo zingasebenzi
Cofa ekunene kwi Ibar yomsebenzi kwaye uqhubeke Umlawuli womsebenzi.
Phezulu, cofa Ukuqala ngokuzenzekelayo
Zonke iinkqubo ezilayishiwe xa ziqala Windows 10 zidweliswe apha.
Cofa kwinkqubo engafanele ukuqala kwaye ucofe apha ngezantsi Yenza kungasebenzi. Okanye ucofe i iqhosha lasekunene le mouse kudweliso lwenkqubo kwaye ukhethe Yenza kungasebenzi.
Yenza oku ngazo zonke iinkqubo ezingafanelekanga. Nceda uqaphele, nangona kunjalo, ukuba ezinye iinkqubo ezinje ngoKhuseleko lwe-Intanethi kunye neenkqubo zeantivirus kufuneka zibaleke ngasemva ukukhusela inkqubo yakho
Inyani imemori yokufikelela ngokungacwangciswanga khubaza kwiWindows 10
Imemori ebonakalayo yenziwe ngokungagqibekanga phantsi Windows 10. Ngubani ongafuniyo I-SSD hard drive efakiweyo, inkqubo icotha kuphela. Ukuba unayo i SSD Ukuba ufake i-hard disk, sicebisa ukuba ingasebenzi inkumbulo yenyani, yindlela esebenza ngayo:
Cinezela indibaniselwano yesitshixo Windows + X kwaye ucofe ku isixokelelwano
Cofa ngasekhohlo Useto lwenkqubo ephezulu
Cofa apha ngasentla Yandiswa nangaphezulu ngezantsi amandla phezu NONE .
Kwiwindow evuliweyo, cofa apha Yandiswa kunye nememori ebonakalayo NONE .
Akukhangelwa: Lawula ngokuzenzekelayo ubungakanani befayile yokuhambisa zonke iidrive.
Yenza inqaku Akukho fayile yepage kwaye ucofe ku OK.
Windows 10 igcina idatha eninzi kwi ihadi diski(Cache) ukusebenza ngokukhawuleza. Njengeefayile zeprogram ezikhutshelweyo, iifayile ze-intanethi zexeshana, i-thumbnails kunye nokunye okuninzi. Kucetyiswa ukuba ucime idatha okanye ukucoca umnikezeli wedatha.
Ngena kwibar yokukhangela ezantsi ngasekhohlo Ukucocwa kweDiski kwaye ucofe kuloo nto Inkqubo yenkqubo.
Kwiwindow entsha evulayo, khetha i-hard drive kwaye ucofe u-Kulungile.
Windows 10 ibala ukuba ingakanani indawo yokugcina enokukhutshwa.
Uluhlu lubonakala apho unokumisela ukuba yeyiphi ifayile ofuna ukuyicima. Cofa Kulungile
Windows 10 ijongeka intle kakhulu enkosi kwiziphumo ezibonakalayo. Nangona kunjalo, ukuba Windows 10 ifakiwe kwikhompyuter ebuthathaka, kuyacetyiswa ukuba kungasebenzi iziphumo ezibonakalayo.
Yenza inqaku Lungisa ukusebenza kakuhle.
Nangona kunjalo, unokhetho lokucima ngesandla izinto ezibonakalayo, ezinjengopopayi xa unciphisa, ukwandisa iwindow, oopopayi kwibar yomsebenzi, njl.
Ingqalelo: Ngubani omnye I-SSD hard drive akufuneki usebenzise la manyathelo.
Xa idiski enzima ihlazekile, idatha ihlelwa kwakhona. Ke Windows 10 inokufikelela kwidatha ngokukhawuleza. Sikubonisa indlela yokukhusela i-hard drive apha:
Qalisa ifayile ye- Windows Explorer
Cofa u iqhosha lasekunene le mouse kwi-hard drive ofuna ukuyichaza kwaye ukhethe iimpawu.
Kwiwindows entsha cofa izixhobo kwaye uqhubeke Yandisa.
Yenza Windows 10 ngokukhawuleza ngehardware kunye nesoftware
Ukuba ufuna ukwenza Windows 10 ngokukhawuleza okukhulu, faka enye I-SSD hard drive. Iinkumbulo zeflash zangoku zinezihlandlo ezibini ukuya kwezintathu ezikhawulezayo zokubhala kunye nokufunda.
Ezo yayizezengcebiso zokwenza Windows 10 ngokukhawuleza. Ngokuqinisekileyo zininzi iinkqubo ezikhoyo kwintengiso ezenza ukuba isebenzise ikhompyuter yakho yeWindows kwaye ikhawuleze. Ezinye zazo CCleaner okanye I-Ashampoo WinOptimizer
Ingcebiso ekhawulezileyo: Leliphi ikhadi lesandi elifakiweyo?
IFirefox entsha yolwandiso lweekhonteyina zeFacebook
Jonga iimbono ze3D zezixeko ngaphakathi Windows 10
Windows Defender scan ngaphandle kweintanethi
Hambisa ifolda ye-OneDrive
Faka iWindows 7 okanye iVista kwintonga ye-USB
IFirefox - yongeza injini yokukhangela
Khubaza ukuvala isikrini seWindows 8
Windows 10 irekhodi yesikrini
Qhagamshela ngqo kwindawo ethile kwiwebhusayithi
i Beschleuniger ikhompyutha Umthengisi Windows windows 10